१४ लाखमै यसरी बनाउन सकिन्छ कोरियन प्रविधिको आधुनिक घर (भिडियोसहित) – iNews16
यो अधिकांश नेपालीको सपना हो । किनभने हामी नेपालीहरु फ्ल्याट सेयरिङमा भन्दा आफ्नै स्वामित्वको अलग्गै घर होस् भन्ने चाहना राख्छौं । हामीहरु रोजगारी खोज्न, अध्ययन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न दिनानुदिन शहर बजार प्रवेश गरिरहेका हुन्छौं । बढ्दो शहरीकरणसँगै जग्गाको भाउ आकासिँदै गएको छ।
तपाईंहामीमध्ये अधिकांशले दशौं वर्ष मिहेनत गरेर एउटा टुक्रा जग्गा जोड्छौं । र, घर बनाउनका लागि फेरि वर्षौं संघर्ष गरिरहेका छौं । त्यसैका लागि हामी स्वदेशमा होस् वा विदेशमा दिनरात घोटिएर काम खाइरहेका छौं ।आरसीसी ढलान गरेको सामान्य डिजाइनको एकतले घर बनाउनुपर्यो भने पनि ३०/३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामान्य वर्गका मान्छेलाई त्यतिका पैसा जम्मा गर्न निकै कठिन हुन्छ ।
सायद आजका दिनमा तपाईंले पनि यो समस्या भोगिरहनु भएको हुनसक्छ । तपाईंसँग जग्गा छ तर पुँजीको अभावमा घर बनाउन सकिरहनु भएको छैन भने तपाईंका लागि यो समाचार निश्चय पनि उपयोगी बन्नेछ । तपाईंले सस्तो मूल्यमै आकर्षक, अत्याधुनिक र वर्षौं टिकाउ हुने कोरियन प्रविधिको घर बनाउन सक्नुहुनेछ । एसवाई प्यानल नेपालले तपाईंको रोजाइ अनुसारको डिजाइनमा सस्तो मूल्यमै चिटिक्कको घर बनाइदिन्छ ।
Previous दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
Next महिला डाक्टर देखेपछि प्रा’’इभेट पा’’र्ट न’देखाई जान्छन् झनै दुःख पा’एपछि आउँछन् : डा अनुपमा कार्की